Inotakurika Mhepo Inotonhorera Fekitori | China Inotakurika Mhepo Inotonhorera Vagadziri uye Vatengesi
XK-13 / 15SY inotakurika yekunze mvura evaporative mweya inotonhorera inozivikanwa kwazvo mhando yekutengesa inotakurika mweya inotonhorera, inogona kudzikisa tembiricha kuburikidza nemvura evaporative ine yakaderera kudyiwa. Iyo ine zvimwe zvinhu sezviri pazasi: Chitarisiko Chakanaka Nyowani PP Zvinhu zvepurasitiki muviri, Anti-UV, Anti-kukwegura, hupenyu hwakareba ti ...
XK-18SYA Inotakurika maindasitiri evaporative mweya inotonhorera yemusangano
XIKOO yakagadzirirwa XK-18SYA base pamaindasitiri emhepo inotonhorera. Simudzira iyo inotonhorera yemhepo inotonhorera ine 350L hombe yemvura tangi, mavhiri, gokora mhepo pombi uye mweya diffuser kuti ive XK-18SYA. Saka Inogona kumira uye kutakurika pasi, pasina kuiswa. LCD + Remote control, pane gumi nemaviri akamhanya akachinja, pamusoro pe ...
XK-06SY evaporative imba inotakurika mweya inotonhorera China kugadzira
XK-06SY evaporative imba inotakurika mweya inotonhorera China kugadzira XK-06SY imba inotakurika mweya inotonhorera inozivikanwa kwazvo kumba, hofisi, kamuri. shopu nedzimwe nzvimbo. Vazhinji vanogovera zvigadzirwa vanotora iyi modhi kune yavo bhizinesi, uye kune kwakawanda kurumbidzwa kweXK-06SY kubva kune vekupedzisira vashandisi. XK-06SY ...
XK-75 / 90SY renje evaporative swamp Mhepo inotonhorera fan fan
XK-75 / 90SY renje evaporative Mhepo inotonhorera fan ndeyeimwe yakasarudzika modhi hombe tangi mweya inotonhorera. ine bhuku uye auto nzira mbiri dzekuwedzera mvura netangi hombe 120L. Zvikamu zvaro zvemhando sezviri pazasi: Nyowany pp zvinhu muviri XK-75 / 90SY vane Nyowani PP Zvinyorwa zvepurasitiki muviri, Anti-UV, Anti-kukwegura, hupenyu hwakareba nguva. kupisa kwakanaka ...
XK-18 / 23SY 18000m3 / h 23000m3 / h hombe yemweya inotakurika indasitiri yemvura inotonhorera mhepo
XK-18 / 23SY 18000m3 / h 23000m3 / h hombe inotakurika yemvura inotonhorera mweya XIKOO hombe inotakurika yemvura mhepo inotonhorera inoderedza tembiricha kuburikidza nemvura evaporative. Uye yakaderera kudyiwa. iyo inharaunda inoshamwaridzika chigadzirwa. • Uya nemhepo yakachena XIKOO mhepo inotonhorera ine guruva chiratidzo mambure kusefa mweya, kana nharaunda ...